Myanmar လား Burma လား အိုဘာမား .. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Myanmar လား Burma လား အိုဘာမား ..
Myanmar လား Burma လား အိုဘာမား ..
Posted by ကထူးဆန်း on Nov 17, 2012 in Community & Society | 40 comments
ဘာရယ်မဟုတ်။ တစ်ကျော့ပြန် မေးခွန်းလေးပါ ။
လင်းယုန်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ခြေချတော့မှာပါ ။
မြန်မာနိုင်ငံ တံခါး ဖွင့်လာ တဲ့ ရှစ်လ အကြာမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ခြေချခဲ့ပါသည် ။ အဲ့ဒီ့တုန်းက Myanmar ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို ရှောင်ကွင်းခဲ့ပါသည် ။
အခု လ ၂၀ အကြာမှာ အမေရိကန် သမ္မတ မြန်မာပြည်ကို ခြေချပါတော့မယ် ။ အခြား ပြောင်းလဲ ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေဆီ အမေရိကန် သမ္မတ သွားရောက်ခဲ့တာ နဲ့ ဆိုရင် အရမ်း မြန်လွန်းနေပါတယ် ။
လမ်းကြုံလို့ဘဲဝင်ဝင် ၊ သူ့ နိုင်ငံကစီးပွားရေး ကုမ္မဏီတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဝင်နိုင်အောင် အားပေးတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အစိုးရ စားရိတ်နဲ့ လာ နိုင်တုန်းလာတာ ဘဲထားထား၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက တော့ အားတက်သရော ကြိုဆိုနေကြပါတယ်။
ရောက်လာတဲ့ အခါ Burma ဘဲ ပြောဦးမလား ။ Myanmar လို့ ပြောင်းသုံးတော့ မလား သိချင်စမ်းပါရဲ့ …
မနေ့ က အင်းယားလမ်းက ဖြတ်လာတော့ ဘွဲ့နှင်း သဘင်ခန်းမကြီး ကို ပြင်ဆင်နေတာတွေ ထဲက နေ Yangon University Campus ရယ်လို့ မီးထိုးထားတာ တွေ့လိုက်တော့ ဒီမေးခွန်းလေး ခေါင်းထဲရောက်လာလို့ ပါ ။
နောက်ပြီး ဘယ်သူတွေကို တက်ရောက်နားထောင်ခွင့်ပေးမှာလဲ ။ တက္ကသိုလ်မှာ လုပ်လို့ တကယ်ဘဲ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တွေ တက်ရောက်ခွင့် ရမှာ လား ။ ကြံ့ဖွတ် အဖွဲ့ဝင်တွေ ဘဲလား .တက်ရောက်ခွင့် ရသူတွေကကော ပြန်လှန် မေးခွန်း ထုတ်နိုင်ကြပါ့မလား သိချင်မိပါသည်။
မြန်မာသတင်းထောက်တွေ ထဲ Myanmar လို့ မသုံး Burma လို့ သုံးလို့ဆိုပြီး ဖိနပ်နဲ့ ပေါက်မဲ့ သူလည်း မရှိလောက်ပါဘူး နော် ။။။ :harr:
အော့ဖ်ဖစ်ရှယ်တော့.. မြန်မာလို့.. မဖြစ်သေးပါ..။
ဒါပေမယ့်.. အိုဘားမားက.. သူ့နာမယ်နဲ့ တူလို့.. ဘားမားလို့သုံးမယ်ထင်ပါကြောင်း…
မြန်မာတွေက.. တိုင်းပြည်..လူမျိုးနဲ့.. နိုင်ငံသားအမည်.. အင်္ဂလိပ်လိုရေးရမှာ.. တူတူဖြစ်နေတော့.. အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်လို့.. မဖြစ်နိုင်လို့တဲ့လေ…။
ဆိုတော့… Deal အနေနဲ့..
မြန်မာပြည်ကို.. မြန်မာလို့ သုံးစေချင်ရင်.. “အမေရိကား”ကို.. မြန်မာတွေက.. “အမေရိကန်နိုင်ငံ”လို့..ခေါ်နေတာတွေ… အမေရိကန်သမ္မတတွေ.. အမေရိကန်သွားမယ်တွေ.. စသဖြင့်.. ထစ်ဆို.. လှမ်းလှမ်း”ကန်”နေတာတွေ.. မလုပ်မှတဲ့..
မြန်မာစာကို.. မြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်.. …အမေရိကားက.. အမေရိကန်-မြန်မာတွေအတွက်မပြောနဲ့… မြန်မာပြည်က. မြန်မာတွေအနေနဲ့တင်.. မြန်မာနဲ့.. မြန်မာပြည်နဲ့..
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့.. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနဲ့.. မြန်မာသမ္မတနဲ့.. မြန်မာ့သမ္မတနဲ့..
မြန်မာ့..မြန်မာ.. မြန်မြန်ပြောရင်…. မြန်မာလိုတောင်မပြောနိုင်သလိုဖြစ်ပြီး.. ရှုပ်ထွေးနေတာ…
မြန်မာလူမျိုး..ဘာသာ..သာသနာအကြောင်း…. မြန်မာသမိုင်းကြောင်း..ရှေးကဘားမင်န်းအကြောင်း.. နောက်တော့.. ဘားမီစ်းအကြောင်း..ဘားမား-မြန်မာအကြောင်း.. မြန်မာလိုသာပြောရင်. မြန်မြန်မြန်းရမှာ.. သေချာတယ်..
Action noun တွေ 動詞 တွေအကြောင်း ဆက်တူးရင် စာတမ်းတပုဒ်ရလောက်ရဲ့.
Ordessy: My name is “No one”.
And beats cyclops.
Cyclop shouts: No one kills me.
အနှီ ဂွတီးဂွကျ အခြေအနေကို.
အိုဘယ့်. ပါဠိကိုဇမ်းတင်လွန်းခဲ့ပြီး. ပကတိ တန်ဖိုးလျော့ကျခဲ့တဲ့
တိုင်းပြည်မဖွံ့ဖြိုးလို့ ခေတ်သုံး စကားလုံးတွေ ချို့တဲ့ နေခဲ့ရတဲ့
သဂျီးရေ..အဲ့လိုဆိုရင် France ကို ပြင်သစ်၊ China ကို တရုတ်၊ Europe ကို ဥရောပ၊ အဲ့လိုခေါ်နေတာတွေကိုရော…
ကျန်တာတော့ မသိပေမယ့် France ကို ရှေးမြန်မာများက ဖရန်စစ် လို့ လိုက်ခေါ်ကြရင်းနဲ့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပြင်သစ် လို့ ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်..
လုံမတို့က အသံထွက်မှားပြီး ခေါ်နေတာမှ မဟုတ်တာ..မြန်မာမှုပြုထားတာလေ…အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ မှားရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့… America လို့သာ ပြောတာပါ လုံမသင်ရသလောက်ဆို နိုင်ငံကို United State of America လို့ အပြည့်အစုံခေါ်တာမို့လား…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာစာမှာတော့ United State of America ကို အမေရိကန်နိုင်ငံလို့ပဲ ခေါ်ပါကြောင်း…
ရွာဆူရတဲ့အထဲ သူကြီးက ပြဿနာရှာပြန်ပလား….
မြန်မာစာက မြန်မာသဒ္ဒါအရ ရေးတာပြောတာလေ
အင်္ဂလိပ်စာက အင်္ဂလိရှ့် ဂရမ္မာ အရ ရေးတာ ပြောတာလေ
မြန်မာဘာသာမှာတော့ မြန်မာဆိုတဲ့စကားလုံးကို အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အစုံနဲ့သုံးတာမဟုတ်ပါဘူး…
နာမ် ရှေ့က ကပ်ထည့်တဲ့ နာမ၀ိသေသန အဖြစ်ပဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာသဒ္ဒါရဲ့သဘောကိုက ယေဘုယျနာမ်တွေကို ရှေ့က နာမ၀ိသေသနကပ်ပြီး သီးခြားနာမ်ပုဒ်တွေဖြစ်အောင်တွဲစပ်ယူတဲ့စံနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာလူမျိုး ဆိုတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုတာမှာ မြန်မာချင်းတူလဲ နောက်ကနာမ်ကမတူလို့ ဘာမှ မှားစရာမရှိပါကြောင်း
” သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်း တွေ့ဆုံပြီး၊ သူတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း ကြားနာဖို့ရှိပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အင်္ဂလိပ်လို Burma ခေါ်မလား Myanmar ခေါ်မလား ကိစ္စမှာတော့ – Burma ဆိုတာကိုပဲ ဆက်ပြီး ရည်ညွှန်းသုံးသွားမယ်လို့ သမ္မတအိမ်ဖြူတော်အရာရှိတွေက ပြောခဲ့ပါတယ် ”
အဲလိုဆိုတော့ Burma ပဲ ခေါ် ဖြစ်အုံးမယ်ထင်ပါတယ် …
အိုဘားမား က ပြောတွားဒယ် ..
သူက မြန်မာ လို့ ကြောမှာဘာဒဲ့ ..
ဗားမား လို့ ကြောဘာဘူးဒဲ့ …
ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးလဲ ကျွဲကူးရေပါ ဆိုသလို ရှိသင့်သလောက်ရှိမှာမို့ ကြိုဆိုပါတယ်…။
အဲဒါ သက်သက်ဂျီးတော်နွားလာကျောင်းတာ လို့တော့ဖြင့်
အောက်ကကော်မန့်စာက.. အရောင်ရင့်မှတ်တမ်းမှာ.. 11/15/12 ကရေးထားတာ…
အိုဘားမားဘာပြောတယ်ကြည့်ပြီး.. ဘာဖြစ်လာနိုင်မယ်.. အဆုံးသတ်.. မှတ်ချက်ချပါမယ်..။
အိုဘားမားသမ္မတဖြစ်တော့.. ကိုင်ရိုသွားပြီး.. ကမ္ဘာကျော်မိန့်ခွန်းပြောတယ်..။
အာရပ်စပရင်းကြောင့်.. အီဂျစ်အပါအ၀င်.. အာရပ်အာဏာရှင်တွေတော်တော်များများ ပြုတ်ကြကုန်ပါတယ်..
ဒီတခေါက်.. သူသမ္မတပြန်ရွေးခံရတာမှာ.. အာရပ်စပရင်းရဲ့ ခရက်ဒစ်လည်း.. အပြည့်ပါပါတယ်….။
အရှေ့တောင်အာရှမှာ.. နောက်၎နှစ်အတွင်း. အပြောင်းအလဲ.. ဒါမှမဟုတ်.. တိုးတက်မှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…။
ကံကောင်းရင်.. အာစီယံဟာ.. ကမ္ဘာတန်း..တန်းဝင်သွားလိမ့်မယ်..။
စကားမစပ် သဂျီးကောဘာမှာချင်သေးလဲ အိုဘားမားအပြန်မှာထဲ့ပေးလိုက်မယ်လေ
ကျွန်ုပ်နာမည်ကိုလဲ ဘာမားစီတီဇင်ခေါ်နေမှ ဒွတ်ခ …
ကျွန်မ နားလည်မိလိုက်သလောက်ကတော့ အဲဒီ အာရပ်စပရင်း အပြီး ပြုတ်သွားတဲ့ အာရပ်အာဏာရှင်တွေ နေရာမှာ ဝင်လာသူတွေက ဘာသာရေး အင်မတန် အစွန်းရောက် တွေ ဆိုရှင့်။
ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး၊ ရှင်ကြီး ကျားထက် ဆိုးသလို ဖြစ်ကုန်သလား။
အိုဘားမား ကတော့ စကားပြော ညံ့သူမဟုတ် တဲ့အပြင် အခြေအနေ အရိပ်အကဲခတ် လဲတော် သူမို့ သူ့ကို ကျသွားအောင် စည်းရုံးနိုင်မယ် ထင်တာပါဘဲ။
ဒါလဲ ကျွန်မ အမြင်ပါ။
အခု..ဒါမှမဟုတ်.. မကြာခင်.. အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာစစ်ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း..
သူတို့.. ရေနံရောင်းပြီး.. ၀ယ်ထားတဲ့လက်နက်တွေ.. အားရပါးရ.. သုံးကြ..ချကြမယ်ထင်ကြောင်း…
ယူအက်စ်၊ ရုရှား၊ ချိုင်းနား၊ (စီးပွားကျနေတဲ့)အီးယူတို့.. လက်နက်တွေ… ထိုးရောင်းကြမယ်ထင်ကြောင်း..။
ကျန်တာဘာဖြစ်မလည်းတော့.. ပိတ်ကားပေါ်ကြည့်စေလိုကြောင်း.. ရယ်..။
အခု လည်း အစ္စရေးနဲ့ ဟာမတ် နဲ့ ပြန်ဆော် ကြလို့ အီဂျစ် ၀န်ကြီးချုပ်က ဟာမတ်စ်တွေကို သွား အားပေးတယ် ဆိုတော့ ..
အင်း .. ဒီဇင်ဘာ ၂၁ လည်း နီးလာပြီ..
အစ္စရေးတွေ ပါလက်စတိုင်းတွေ တော်တော် ပျင်းပြီး တုံးကြတာဘဲ .. ဒီလိုနေရာ ဘာလို့ နေနေကြလဲ မသိဘူး .. ပြောင်း သွားကြပါလား ..
ဟဲ ဟဲ ဟဲဟဲ ..
ရှမ်းကသူတို့ကိုယ်သူတို့ တိုင်း English လိုခေါ်မယ်ဆိုရင် Shan လို့ဆက်သုံးမလား Tai လို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တရားဝင်ပြောင်းသုံးရမလား..
ကရင်ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ပါကညော Karen လို့ဆက်သုံးမလား Kayin လို့သုံးမလား
ဂျပန်တွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့” နိဟွန်း” သူများတွေခေါ်တာကျလူမျိုးနဲ့စာကJapanese နိုင်ငံက Japan
တရုတ်ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ “ကျုံးကို” သူများတွေခေါ်တဲ့လူမျိုးနဲ့စာက Chinese နိုင်ငံက China
ယိုးဒယားတွေသူတို့ကိုသူတို့ခေါ်တာ “ထိုင်း”သူများတွေခေါ်တဲ့လူမျိုးနဲ့စာက “Thai” နိုင်ငံက”Thailand”
နိုင်ငံနာမည် Vietnam လူမျိုးနာမည်Vietnamese
နိုင်ငံနာမည် Indonesia လူမျိုးနာမည် Indonesian
နိုင်ငံနာမည် Laos လူမျိုးနာမည် Laotian
နိုင်ငံနာမည် Cambodia လူမျိုးနာမည် Cambodian
မြန်မာလူမျိုးနဲ့မြန်မာစာကို Myanmar လို့သုံးရမလား Myanmarian လို့သုံးရမလား Myanmese လို့သုံးရမလား
လူမျိုးလဲ Myanmar နိုင်ငံလဲ Myanmar စာလဲ Myanmar ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာမှာဒီလိုတူတဲ့ စကားလုံးရှိတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်လဲမလေ့လာဖူးသေးဘူး၊ညဏ်မမှီလို့ဘဲလားတော့မသိဘူး..
နောက်ပြီး ရှိသေးတယ် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေး ကို Myanma agriculture service တဲ့
မြန်မာ့လေကြောင်း ကိုMyanma Airways တဲ့ အနောက်က r တစ်လုံးကိုဖြုတ်ထားလိုက်သေးတယ်
မာဆိုတဲ့နေရာမှာ မာ့ဖြစ်သွားတော့ r ပြုတ်သွားတယ်..မျက်စိကိုလည်ရော..
တိကျတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တော့ရှိသင့်နေပြီမဟုတ်လား ပညာရှင်ကြီးများ..စဉ်းစားပေးကြပါ..
ခရိုမာ လို့ ခေါ်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလား
ကမ္ဘာမှာ ဗမာ/မြန်မာတွေ နာမည်ကြီးစေတဲ့အကြောင်းထဲမှာ သူရို့ တွေကြောင့်လဲ ပါတာပဲကိုး
အင်းနော် … အိုဘားမားကို မွေးစဉ်က အရင်စစ်ဖြစ်တုန်းက မြန်မာပြည်ကို သူ့မိဘတွေကများ ရောက်လာလို့လား မသိဘူး။ ဒီမှာ မွေးခဲ့လို့များ အိုဘားမားရယ်လို့ နာမည်ပေးသလားဆိုတာ သူလာတုန်းလေး အင်တာဗျူးမယ့်သူရှိရင် သိချင်ပါရဲ့။
သူ့ကို တကယ်တော့ အိုဘမ လို့ ခေါ်ရမယ် ထင်တယ် ( Barack Hussein Obama, Jr. )သူ့ကို Honolulu, Hawaii မှာ မွေးတာပါ . အင်ဒိုနီးရှားမှာ နေခဲ့ဖူးပါတယ် ။
ကထူးဆန်းရေ နင့်အဘရှိတဲ့ နေပြည်တော် မသွားဘဲ ရန်ကုန်ကိုပဲ အိုဘားမား လာမှာသာ ကြည့်ပေတော့ ဘားမားခေါ်မလား မြန်မာခေါ်မလားဆိုတာ…
စစ်တပိုင်းအစိုးမရရဲ့ တုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့ တနေ့က လွှတ်ပေးတဲ့ အကျဉ်းသား လေးရာကျော်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တဦးမှ ပါမလာတာ တွေ့ရတယ်…
သမဒရုံးကတော့ အရှက်ပြေ အလုပ်သဘော လာရောက်လည်ပတ်တယ် ဆိုလေရဲ့…
နေပြည်တော် ကို မသွားဘဲ ၊ ရန်ကုန်ကိုပဲ အိုဘားမား က လာမှာဆိုတော့ ။
အဘ သိန်းစိန်က အိုဘားမား ကို ၊ ဖနွမ်းပင် ကနေ ရန်ကုန်ထိ လာတွေ့ရမယ် ။
အိုဘားမား က အမေစု ကိုကျတော့ အိမ်တောင်သွားတွေ့မှာ ဆိုတော့ ။
အဘတို့ သမ္မတကြီး အဘ သိန်းစိန် ရဲ့ Role က နဲနဲ ကျ သွားပြီး ။
အမေစု ရဲ့ Role က နဲနဲ ပိုမြင့်လာသလိုပဲ ။
အဘတို့ သမ္မတကြီး သနားပါတယ် ။ ဟန်ဆောင် ပန်ဆောင်လေးတောင် မ ငြင်းနိုင်ဘူး ။
ဖနွမ်းပင်မြို့ကနေတောင် ပြန်လာပြီး ၊ အိုဘားမား ကို ရန်ကုန်ကို လာတွေ့ရမယ် ။
အဘ သာဆိုရင် ၊ ဖနွမ်းပင် ကနေ ရန်ကုန်အထိ ပြန်လာပြီး လာမတွေ့ပါဘူး ။
ကိုယ် ရုံးစိုက်တဲ့ နေပြည်တော်ကို လာတာဆိုရင်တော့ ထားပါ ။
အင်း ၊ တိုင်းပြည်များ ဆင်းရဲတော့ မျက်နှာ ငယ်လိုက်တာ ။
ဘဖောရေ ……ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်က သမတဂျီး အိုဘားမား နေပြည်တော် သွားမှာကို မလိုလားကြောင်း ပြောထားတာပါ။ တနေ့က ဦးဝင်တင်နဲ့ အင်တာဗျူးတခုမှာလည်း အိုဘားမားကို အောင်ပွဲခံဖို့ အချိန်မဟုတ်သေးကြောင်း၊ အကယ်၍ ဦးသိန်းစိန်ကို သာဓုခေါ်မယ်ဆိုရင် သူ့တို့ကြောင့် နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများကိုလည်း အမျှလေးတော့ ဝေပေးသွားပါလို့ ပြောသွားတယ်။ ဒီလို အခင်းအကျင်းတွေကြောင့်ပဲ အိုဘားမားအနေနဲ့ ရှဉ့်လည်းလျောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ ဖြစ်အောင် မြန်မာပြည်မှာ ၆နာရီလောက်ပဲ နေဖို့အစီအစဉ် ဆွဲလိုက်ပုံရတယ်။ အကယ်၍ ရက်နဲ့ချီနေရင် သံတမန်ထုံးတမ်းအရ မြို့တော် နေပြည်တော်ကို သွားဖို့စဉ်းစားရတော့မှာကိုး…။ ဒါဆိုရင် တိုင်ပြည်ပိုက်ဆံတွေ မတရားရယူပြီး အတင်းအဓမ္မ တည်ဆောက်ထားတဲ့ နေပြည်တော်မြို့ တည်ရှိမှုကို သဘောတူသလို ဖြစ်သွားပြီ။ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေခေတ်ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုတဲ့သဘော ဆောင်သွားနိုင်တယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာ့အာဏာရှင် အဆက်ဆက် စစ်ဗိုလ်များ အမေရိကန်ကို ကပ်လို့မရလို့ နင်ပဲငဆ ဆဲရေးတိုင်းထွာနေခဲ့တာပါ၊ သူတို့ အနေအထား သူတို့ကောင်းကောင်း သိပါတယ်။ သိလို့လည်း ရာစုနှစ်တဝက်ကျော် ရှင်သန်နေနိုင်ခဲ့တာပေါ့…။
” ဦးသိန်းစိန်ကို သာဓုခေါ်မယ်ဆိုရင် သူ့တို့ကြောင့် နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများကိုလည်း
အမျှလေးတော့ ဝေပေးသွားပါလို့ ပြောသွားတယ် ”
ကောင်းလိုက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးတွေ ။
” မြန်မာ့အာဏာရှင် အဆက်ဆက် စစ်ဗိုလ်များ အမေရိကန်ကို ကပ်လို့မရလို့
နင်ပဲငဆ ဆဲရေးတိုင်းထွာနေခဲ့တာပါ ”
ကပ်ခွင့်လဲရရော ၊ ပလူးလိုက် ဖါးလိုက်ရတာ ၊
ဘေးလူ ( အဘတို့ ပြည်သူား ) တောင် အမြင်ရှက်တယ် ။
ဘဖော ရေ ၊ ပလူးကျတာတော့ တစ်ဘက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူး .. လ၂၀ အတွင်းရောက်လာတယ် ဆိုကထဲ က ဟိုဘက်ကလည်း ပလူးခံချင်နေတာဘဲလေ..
ဘားမားလို့ ဘဲ ဆိုဆို
အောက်ကျနောက်ကျ နိုင်ရတာတော့ အတူပါဘဲဗျာ။
ညံ့ခဲ့တော့ သူများအောက်ရောက်တာ ဘာဆန်းမလဲနော်
ဘားမားပဲ ခေါ်ခေါ် မြန်မာပဲ ခေါ်ခေါ် သူဘယ်လို မိန့်ခွန်းပြောမလဲ ဆိုတာပိုစိတ်ဝင်စားတယ် ။
ကထူးဆန်း သွားဖြစ်အောင် သွားပြီးနားထောင်ခဲ့ပါ။ live လွှင့်ရင်လည်း ကောင်းသား နော်။
ဦးမာဃလည်း အဲဒါကို live လွှင့်လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။
မြန်မာက မလွှင့်ရင်တောင် နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနတွေက လွှင့်ပေးနိုင်တယ်
တိုင်းရေးပြည်ရေး အရေးကြီးနေတာ နတ်သမီး တစ်ဖက် ၅၀၀ ခဏထား၊
သတင်းသွားယူပြီး ရွာထဲမှာ ပြန်မျှဝေမလားလို့ မျှော်လင့်နေတာကို……
မစ္စတာမာဃ ကိုယ်တိုင်က မီဒီယာတွေက လွှင့်တာကို အားကိုးနေပါလား။
သွားချင်ပါရဲ့ အဲ့ဒီလောက် လူရာမ၀င်တော့ ခက်သား..
Obama ရဲ့အဘိုး Onyango Obama က ၁၈၉၅ မှာ မွေးတယ်လို့ဆိုတော့ Burma နဲ့ မဆိုင်လောက်ဖူးထင်ပါတယ်..။
Onyango Obama က ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာ ထမင်းချက်အနေနဲ့ လိုက်လာဖူးပြီး မြန်မာမတစ်ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ကျဖူးတယ်ဆိုဘဲ…။
သူ့မြေးကတော့ အဘိုးထမင်းချက်အနေနဲ့ ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ နိုင်ငံကို Air Force One စီးပြီး ရောက်လာတော့မှာပါ…။
Fuck it. Burma or Myanmar, it is justaname. nothing else. Try to develop the country first, then we talk about the name.
I’m always onamove, traveling all over the world. I always get the problem at each air port immigration counter with my Burmese passport. Most of the countries don’t know what is Burma or Myanmar. My country code is not in the list. I feel embarrassed. So I really sick of hearing of people talking about Burma or Myanmar. I really want to give up my passport. So please stop talking about the name of Burma or Myanmar for god sake
ရဲရင့်ငယ်ရဲ့ ဆိုဒ်မှာတွေ့လို့ မဖတ်ရသေးသူများဖတ်နိုင်အောင် ဒီမှာလာ ရှယ် လိုက်တယ်ဗျာ။
ဟိုတုန်းကဆို ဖိုရမ်မှာ တင်ရမဲ့ ဟာမျိုးပေါ့နော်။
ခရက်ဒစ်တူ ရဲရင့်ငယ် နှင့် (ရေးသားသူ) ကို မင်းကျော်စွာ။
အမ်ကယ်ဆမ် အလံစိုက်ပီ အဘရေ ….
အခုပဲ ဥက္ကာကိုကိုရဲ့ Face Book မှာ ဓါတ်ပုံတက်လာတယ် ။
““အော်… အော်.. ကျယ်ကျယ်အော်… နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုသလို ကျယ်ကျယ်အော်”” တဲ့။
အမေရိကန်သမ္မတကြီး ကျန်းမာပါစေဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေကို လိုက်အော်ခိုင်းနေတဲ့
ရန်ကုန်အစိုးရ လူမှုရေးဝန်ကြီး။ Photo by- Oakkar Ko Ko
၀န်ကြီး ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုသလို ကျယ်ကျယ်အော် ဖို့ လိုက်ပြောနေတယ်တဲ့ ။
အော် ၊ ဒုက္ခ ၊ ဒုက္ခ ၊ အခုကျတော့လည်း ၊ ပိုလွန်းနေပြန်ပြီ ။
အရင်တုန်းကတော့ နင်တို့ပဲ ” ပြည်ပ အားကိုး ပုဆိန် ရိုး ” ဆို ၊ အညိုးညိုးပဲ ။
ချက်ချင်းကို ပြောင်းကြတာကိုး ၊ အိနြေ္ဒကို မဆည်နိုင်ကြဘူး ။ စိတ်လေတယ် ။
ဟိ…ပါပါကြီး အူးနေ၀င်းနဲ့ပဲတန်တဲ့ ငတိရီးပါလားဗျာ…
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအစိုးရကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထောမနာစရာ မလိုဘူးဆိုတာတော့
သူမပြောနဲ့ သူ့သမီး ညိုချောလေးတောင်သိတယ်။(ထင်တာပဲ)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု့တွေကို အသိအမှတ်ပြုတာ ချီးကျူးတာကလဲ ဝေါဟာရတော်တော်စုံနေပါပြီ… ဥပမာဘီလိုက်ဘားမားတို့ဘာတို့…..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပါပါကြီးခြံစည်းရိုးနား လူအလာခံတဲ့ risk ကို ယူခြင်းအားဖြင့်
မထူးလဲ နောင်ကို မျက်နှာပျက်မယ့်အတူတူ….
ဒါနဲ့… ကျုပ်တို့ဆီမှာ အမေဒိကားကို ဘာများရောင်းစရာရှိပါလိမ့်မလဲ….
မြန်မာနိုင်ငံ၊ မင်္ဂလာပါ …
နိုက်စ်တူ မိယူ အမေရိကား…